ကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ (မိုးထက်အောင်) | PoemsCorner
ကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ (မိုးထက်အောင်)
ခင်ဗျားသယ်ဆောင်လာမယ့်နှင်းရည်စက်တွေနဲ့ မြောက်ပြန်လေအေးကိုမျှော်နေမိတာ ကျွန်တော်ပါဒီဇင်ဘာ……..။
ရွက်ခြောက်တွေကိုကောက်ရင်း သီကျူးတဲ့ တေးသွားမှာ ဘာသံမှပါမလာခဲ့ဘူး။သီချင်းမရေးရ၊ကဗျာမရေးရနဲ့အိမ်မက်တွေလည်း လုံးပါးပါးခဲ့ပြီ။နှင်းမှုန်တွေရဲ့ခြုံလွှာကို လွမ်းဆွတ်မိပါတယ်ဒီဇင်ဘာ။(ခင်ဗျား ပြန်လာခဲ့ပါ……….)။
မမြင်ယောင်ဆောင်ကန်းခဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေအတွက် ဘယ်ဖက်ထောင့်မှာ နည်းနည်းနာတယ်။ခင်ဗျားသိချင်မှ သိမှာပါ ဒီဇင်ဘာ။ကျွန်တော့်မှာ ရင်ဘတ်ပါလာခဲ့တယ်ဆိုတာ။ခင်ဗျားထင်ထားတဲ့စက်ရုပ်က ပန်းနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ထိလွယ် ရှလွယ် တိတ်တိတ်လေးပွန်းပဲ့လွယ်ခဲ့တာ သံသယမပါပဲ လှမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီဇင်ဘာ………….။
စကတည်းက မယဉ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်။၀င်သက်ထွက်သက်တိုင်းမှာ သေမင်းရနံ့ ထုံနေခဲ့တယ်။အလှပဆုံး ရှုံးပြရမယ့်ဇာတ်သိမ်းအတွက်အစောကြီးကတည်းက သိနှင့်နေခဲ့တာ ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ် ဒီဇင်ဘာ။(ကျွန်တော့်ကို မသေမချင်းသတ်ပါ………..)။
အရင့်သီးဆုံးဝါကျတွေနဲ့ခင်ဗျားကဗျာကိုအလှဆင်ပါ။ဘယ်နှစ်ပါဒမှာ ဘယ်နှစ်ခါအသည်းကွဲပေးရမလဲ။မှော်ဝင်လက်နဲ့ ခြယ်သတဲ့ အလင်္ကာတိုင်းမှာ သေမင်းရဲ့ဓါးသွားတွေပါလာခဲ့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီဇင်ဘာ။(ခင်ဗျားထင်သလိုသာ ဆက်လုပ်ပါ)။
ကျိန်စာမတိုက်ပဲ စူးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ။ဟိုဘက်ဒီဘက် ထုတ်ချင်းခတ်ခဲ့ပါတယ်။လမင်းရဲ့ ဧချင်းတွေနဲ့ရွှေနားတော်သွင်းဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။အသေခံရင်ဘတ်က ခပ်ယဲ့ယဲ့လေးကြေမွနေတာပဲကောင်းပါတယ်။ဆောင်းညရဲ့ခေါ်သံတိုင်းမှာ ယိမ်းယိုင်ခဲ့သူပါဒီဇင်ဘာ။(ကျွန်တော့်ကမ္ဘာမှာ နှင်းမဝေခဲ့တာကြာပါပြီ………….)။
အလွမ်းမြစ်ရိုးက စောင်းခတ်သံ။နှင်းပျောက်ရှာတဲ့ ရင်မှာ ဆူညံနေခဲ့တယ်။စနစ်တကျရေခဲရိုက်အမုန်းတွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်သာပစ်ခတ်လိုက်ပါဒီဇင်ဘာ။ဒဏ်ရာဆိုတာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးပြယုဂ်တစ်ခုပါ။ဆောင်းရဲ့စွတ်စိုမှုကိုရခွင့်မရှိတဲ့ လူ ယနေ့ မှစ နွေလိုပူပါရစေတော့။
ဒီဇင်ဘာ………။ကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ…….။နွေလိုကောင်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်နေခဲ့တာကြာပါပြီဗျာ………။စံပယ်တွေလူးနေတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေအတွက် လွမ်းနေမိတယ်ဒီဇင်ဘာ……..။ပြီးတော့….သတိရတယ်။ပြီးတော့…….မျှော်လင့်နေမိပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ…………။ ။
In: စကားပြေ Posted By: moehtetaung18 Date: Dec 11, 2013
ကျွန်တော်နဲ့သူမခြေဖ၀ါးအောက်က အရှုံး (မိုးထက်အောင်)
ခင်ဗျားအတွက် ကျွန်တော်က ဗီလိန်လူကြမ်း (မိုးထက်အောင်)
Leave comment6Comments & 816 views
By: နွေ at Dec 12, 2013
ဒဏ်ရာဆိုတာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးပြယုဂ်တစ်ခုပါ… ဒီဇင်ဘာ။
သိပ်ကြိက်မိပါ၏။ အရင်တုန်းကအတိုင်း…. လတ်ဆတ်ဆဲ။
By: moezat at Dec 14, 2013
ဦးလေး ကဗျာများ အမြဲစောင့်မျှော် အားပေးနေဆဲ
By: အသဲကွဲမိုး at Dec 18, 2013
ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ် ဒီဇင်ဘာ။(ကျွန်တော့်ကို မသေမချင်းသတ်ပါ………..)။
By: ကြက်ခြေခတ် X at Dec 18, 2013
By: moehtetaung18 at Dec 21, 2013
ဒီဇင်ဘာ………။ကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ…….။နွေလိုကောင်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်နေခဲ့တာကြာပါပြီဗျာ………။စံပယ်တွေလူးနေတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေအတွက် လွမ်းနေမိတယ်ဒီဇင်ဘာ……..။ပြီးတော့….သတိရတယ်။ပြီးတော့…….မျှော်လင့်နေမိပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ…………။ ။
By: ei lay at Jan 24, 2014